Fariin Calaacal ah: Sida aad Qalbigayga U jebisay Oo Aad Dunida Iiga Dhigtay Kali Waa Mid Aan….. | alcarabiya.com
Home » Fariimo Jaceyl » Fariin Calaacal ah: Sida aad Qalbigayga U jebisay Oo Aad Dunida Iiga Dhigtay Kali Waa Mid Aan…..
Fariin Calaacal ah: Sida aad Qalbigayga U jebisay Oo Aad Dunida Iiga Dhigtay Kali Waa Mid Aan…..	Dhaawaca qalbiga ,marna ma bogsoodo xasuustu marna madhamaato , illinta qoyan marna ma qalasho laakiin jaceylka aan kuu qabo marna ma dhimanayo.
Marna ha ka shalaayin jaceylkaaga sababtoo ah mar ayay ogaan doontaa in ay iska lumisay dhayman kolkii ay mashquulka ku ahayd gurbinta dhagxaha.
mana jiro aduun kan qof haysta qalbiga ugu wanaagsan , uqabida jaceylka 100 ruux oo qaldan marna saamayn kuma yeelanayso noloshaada laakiin naceybka hal ruux oo aad jacel wadaag teen waxa uu leeyahay dhaawicid qalbi tan iyo inta aad nooshahay.
Wax la’aanta tan ugu dhibaatada badan waa marka aad tahay kalinimo iyo dareen jaceyl la’aaneed ; maalintii iigu danbeysay waa ay tagtay oo waxa ay ii ahayd maalin murugo iyo waalinimo iga dhigtay maxaa yeelay waxa aad ka tagtay qalbigayga.
Kuma iloobi karayo waxa aad kala jartay qalbigii aan ku shaqeynayay hadii ay macquul tahay waxa aan usoo jarayaa badda Oceanka aniga oo aanan qoynin lugahayga ; laakiin waa ay adag tahay in aan jaro nolosha adiga oo indhaha ka biyo keenin.
Saacaduhu waxa ay isku bedelaan maalmo , maalmahana isbuuc , isbuucyadana bilooyin , majiro wax is bedelay welina waan ku jeclahay welina waad iga maqantahay
Waxa aad tahay tan qalbigayga jebisay waxa aadna u sabab tahay in aan dunidan aan kadareemo hal qeyb waxa aana layaaba sabata ay saacaduhu isku bedelaan maalmo.
2 Responses to Fariin Calaacal ah: Sida aad Qalbigayga U jebisay Oo Aad Dunida Iiga Dhigtay Kali Waa Mid Aan…..	ibraahim Reply
March 26, 2013 at 9:11	waaaaaaw waan la dhacay calacalka
C/wali maxamad xirsi Reply
March 7, 2013 at 9:11	Italiya waxan jclahay gbar gabadhuna waxa hayo bufis
side ku hali kara jcl kayga